Union Minister for Int’l Cooperation meets with Norwegian counterpart in New York – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister for Int’l Cooperation meets with Norwegian counterpart in New York
Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin, who is attending the 73rd General Assembly of the United Nations in New York, met with Mr. Nikolai Astrup, Norway Minister for International Development at the UN Headquarters at 11.30 am local time on 27th September.
At the meeting, they discussed democracy, peace and national reconciliation processes in Myanmar, repatriation, resettlement and rehabilitation of displaced people in Rakhine State and formation of Independent Commission on Enquiry (ICOE) for solving Rakhine issue.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် နော်ဝေနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ
(၇၃) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကိုယ်ခွဲခေါင်းဆောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၂၇-၉-၂၀၁၈ ရက်၊ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁၃၀ နာရီတွင် နယူးယောက်မြို့၊ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်ရှိ တွေ့ဆုံခန်းအမှတ် GLA-21 ၌ နော်ဝေနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီး H.E. Mr. Nikolai Astrup အား သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှုများ စသည်တို့ကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။